डा. अरुणा उप्रेती - कान्तिपुर समाचार
पोहोर साल नेपालमा भारतबाट १४ फेब्रुअरीमा करोडौंको गुलाबको फूल आयात भयो रे । त्यो फूल सायद केही दिन सुकेर बाहिर फालियो । यो वर्ष गुलाबको फूल आयात झन् धेरै हुने होला ।
मैले केही वर्षअघि डा. रमेशकान्त अधिकारी (वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ) संँग भिटामिनका चक्की झोल र बालबालिकाको स्वास्थ्यबारे जिज्ञासा राखेकी थिएँ । ‘पोषणयुक्त खानाको सट्टा मान्छेले सिसीमा भएको महँगो भिटामिनको झोल खान्छन् । कुनै पनि वैज्ञानिक अनुसन्धानले भिटामिन झोलका रूपमा खानुपर्छ भनेर पुष्टि गर्दैन ।
दुई वर्षअघि मेरी साथीकी ७० वर्षीया आमाको मृत्यु हुँदा सान्त्वना दिन गएकी थिएँ । साथीका ७५ वर्षीय बुबा दु:ख मानेर बसिरहेका थिए । जाडोका बेला भएकाले उनलाई चिसो नलागोस् भनेर कम्बल ओढाइएको थियो । उनी खाटमा बस्थे ।
चुप : कति लागिरहने ?
‘चुप’ किताबमा कसरी महिलामा भारतमा संस्कृतिको नाममा चुप लाग्न सिकाइन्छ भनेर ठाउँठाउँमा विभिन्न महिला र युवतीको भनाइ राखिएको छ । यौन र यौनिकताका बारेमा कुनै किशोरीले प्रश्न गरिन् भने ‘यो त विवाहपछि थाहा भइहाल्छ’ भनिन्छ ।
कसैको घरमा मृत्यु भयो भने किरियापुत्री र त्यस घरका मानिसका लागि बेसार नहाली खानेकुरा पकाउने गरिन्छ । खानामा रङ नदेखिँदा खानै गाह्रो हुन्छ । दु:खी भएर बसेका बेला आँखाले किन सुन्दर देख्नुपर्‍यो र भन्ने भावनाले शोक मनाउन बेसार प्रयोग नगरिएको हो कि ?
डा. अरुणा उप्रेतीका लेखहरु :
सन् १९७८ मा इरानी महिला कालो बुर्का लगाएर सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरू राजाको निरंकुशता, राजाको ‘सावाक’ नामको गुप्तचर संस्थाले गरेको अमानवीय व्यवहारको विरोध गर्दै आन्दोलित थिए । राज्यबाट बेपत्ता पारिएका मानिस पत्ता लगाउनुपर्ने माग पनि सँगै अघि सारेका थिए ।
पेसाले नर्स ३२ वर्षीया युवतीले दोस्रो सन्तान जन्माउँदाको अनुभव सुनाइन्, ‘म गर्भवती भएपछि एक निजी अस्पतालमा जाँच गर्न गएँ । ६ महिनापछि त्यही अस्पतालमा कार्यरत नर्स साथीले त्यो अस्पतालले शल्यक्रियाबाटै प्रसूति गराउने बताउँदै प्राकृतिक तरिकाले बच्चा जन्माउन प्रेरणा दिने अस्पतालमा जान सुझाव दिइन् । त्यसपछि म पाटन अस्पताल गएँ ।’